REHEFA TE HANAO FIFIDIANANA DIA AMPODIO ALOHA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC – MyDago.com aime Madagascar
Mbola eny an-kianja hatrany no mbola ahafahan’ireo mpitarika ny tolona avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana mampita sy manazava ny fizotry ny raharaham-pirenena ankehitriny. Anisan’ny nandray fitenenana teny amin’ny Magro Behoririka androany ny Ct Marcel avy any Manakara. Nambarany fa mitady an-dRajoelina izahay any Manakara sao mba mahazo ny fonay any izy. Aminay hoy izy dia mahazo manao izay tiany atao izy na inon’inona tokanany eto. Tsy misy olona ho voafitaka intsony eto hoy izy. Rehefa tena hanao fifidianana dia ampodio aloha ny filoha Ravalomanana Marc. Ny Ct Randriamamiarizafy Ignace kosa dia nilaza fa Beriziky milaza fa ny tondrozotra no mibaiko azy, diso izany hoy izy fa Rajoelina. Impiry izy no nolazaina fa sokafy ny radio fa tsy vitany. Sahirana ny mpitatitra , ny mpanakanto, sns dia miakatra eny Ambohitsorohitra, fa ianareo any Moramanga hoy Ignance iza no hamaha ny olanareo. Ny Ct Raveloson Constant dia nanamafy ny zavatra efa voalazany tany aloha teny an-kianja Manao fanonganam-panjakana indray Rajoelina hoy izy eo amin’ny lafiny ara-bola. Misy Capsat ara-bolan-dRajoelina dia Hery Rajaonarimampianina. Dikan’ny hoy izy dia mandroba volam-panjakana hanaovana fampielezan-kevitra mialoha,sy handrobahana seza sy vola ihany koa. Izay lalan-kely alehan-dRajoelina hoy Constant dia pempoy. Na Ratsivalaka aza dia raiso dia pempoy fa fotoanan’izany izao. Nambarany fa maninona no tampotampoka eo rehefa lany ny teti-bolam-panjakana amin’ny « demi tour » dia iny fa mirongatra ny ronono an-tavy rehetra. Ny fanontaniana napetrakay tamin’ny Hery Rajaonarimampianina tao Tsimbazaza hoy Constant dia ny hoe izy ity ve izay tianao atao. Ekena hoy izy fa misy ny lavaka tamin’ity taona ity ka tamin’ny volana septambra dia efa tsy nisy vola intsony tao aminay tao. Mbola iny lavaka iny ihany hoy ity mpanao politika ity no ataony amin’ity taona ity. Raha mbola Hery no ao dia Capsat ara-bola ary tsy ahazo fanampiana isika raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana. Ny iangaviana antsika hoyizy dia ireny ihany no hatrany amin’ny teti-bola ka hatrany amin’ny fokontany. Latsalatsao any amin’ny fokontany any hoe ialahy te hividy anay, zarao fa herim-ponay io, ary alefaso ny be dia be kokoa fa anay ihany io.Mijaly izy hoy Constant, io mitonatonana amin’ny elakelan-trano io. Andriamatoa Randrianarisoa Guy Rivo dia nilaza fa aza manaiky fa zavatra roa no tadiavin’andriamatoa Rajoelina. Hamafa tantara izy ka ny tantaran’ny filoha Ravalomanana Marc no tiany ho fafana.Mihevitra izy fa rehefa lafo ny fiaramanidina dia ho adino ny tantaran-dRavalomanana. Nanongam-panjakana izy hoy Guy Rivo tamin’ny taona 2009 ka mieritreritra fa maka avance te ho filoha. Ny olona maka avance hoy izy dia tsy mahay, fa ny olona mahay dia efa fantatry ny olona fa tsy mila « avance » izy. Efa hainy ny mitantana ny vola fa tsy mila maka « avance » amin’ny « patro »n izy fa rehefa tonga ny faran’ny volana vao maka vola. Aza manaiky ho fitahin’ny olona hoe hanao lalan-kely. Fony izaho sekretera jeneralin’ny kaomina hoy Guy Rivo no nitokana ny lalana teny Masay ary tamin’izay no nilazan’ny frantsay fa atao daholo ny lalan-kely. Aleo anao fa rehefa tonga ny febroary dia tsy misyataony intsony eo. Miantso anareo aho hoy izy mba ahafantatra tsara hoe inona no antony mbola hipetrahantsika ao amin’nytetezamita io. Niditra tao isika noho ny baikon’ny filoha ary tsara ho fantatrareo fa tsy miala ao isika raha tsy baikon’ny filoha Ravalomanana Marc. Aleo isika tsy hanao esoeso teny ho azy ireo. Na vitsy an’isa aza izy ireo dia afaka mitabataba. Raiso ny andraikitrareo amin’ny lisim-pifidianana hoy izy.
Auteur Solo Razafy*Publié le 24 novembre 2012 Catégories Politique
2 réflexions sur « REHEFA TE HANAO FIFIDIANANA DIA AMPODIO ALOHA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC »
Nankaiza i bogor mafyTbeGV, fa ireo ilay olona notadiaviny omaly,mbola santionany amin’ny zanak’i dada fotsiny ireo
Ry zanak’i dada eto @ty tranonkala ity, tsy tsara raha isika aloha no mifandramatra eto, fa fifanakalozana sy fifanoroana ihany ireny ataontsika ireny, na dia somary maherihery aza ndraindray ny tenenintsika eto. Teny @ Magro ndray aho androany raha tsy nahatratra ny teny omaly fa tena tratry ny oram-be teny an-dalana d nialoka kanjo foy kely ny fotoana ka i Zafilahy namaramparana sisa no tratrako, androany tonga aloha aho ka naharaka ny zavatra rehetra teny. Teny i Guy Rivo izay mba indraindranareo sy ekenareo teny ary hatokisanareo, toa an’i Me Hanitra sy i senatera Naika. Ary mazava be io nolazainy io hoe <> , sa efa namadika koa v i Guy Rivo @nareo. Angamba tsy izany fa mba diniho ihany eh, isika ihany no hiara-paly hitotorebika miaraka rehefa tonga i dada, d aleo samy manamasaka izay lalana fidiany hampodiana an’i dada fa aoka tsy ho isika samy isika no hifamingana eto, fa manjary diso fahavalo isika, fa ny fahavalon-tsika iraisana d ireo fozaorana ireo d aleo ireo @zay no hatrehantsika; ZAY ALOHA FA MAHEREZA DAHOLO @ SAMY LALANY AVY EHHHHH. Nefa raha hiverina hiaraka aminay ianareo raisinay foana rehefa mbola mitovy ny tanjona.
Précédent Article précédent : TAMBAZOTRA MPAMONO OLONA IO FITONDRANA IO
Suivant Article suivant : HMF : FAMINGAVINGANA MIVANTANA SY ANKOLAKA NO MISY ETO AMIN’NY FIRENENA